သူမမှားပါဘူး ပိုခဈြမိတဲ့ ကိုယျပဲအစကတညျးက မှားနခေဲ့တာပါ … – Shinyoon
January 19, 2021 by Shin Yoon
စိတျပူလို့ဆကျတဲ့ဖုနျးတှေ မကိုငျတဲ့သူမမှားဘူး ကိုယျမလိုမှနျးသိရဲ့နဲ့ အရေးပါခငျြနတေဲ့ကိုယျပဲ မှားတာပါ .. တဈခါတဈလကေတြော့ ကိုယျလဲ သူ့လိုနနေိုငျခငျြပါတယျဆိုတဲ့ စိတျတှဖွေဈမိတယျ ဒါပမေယျ့ တကယျ့လကျတှမှေ့ာ သူနဲ့ဝေးမြားဝေးသှားရငျဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ ကွောကျနမေိတုနျးပဲ
သူချေါရငျ ကိုယျလဲမချေါဘူးဆိုတဲ့ မာနလေးထားကွညျ့ခငျြတယျ ဒါပမေယျ့ သခြောပါတယျ နနေိုငျနပွေီးသားသူက ပိုပွီးပြျောသှားရုံကလှဲလို့ဘာမှ ခံစားသိလာမှာမဟုတျဘူး ကိုယျကသာ မာနတှထေားပွီး ကိုယျပဲ ပွနျပွီး နာကငျြနရေမှာလေ …
ခဈြမိအောငျ ပွုစားခဲ့တဲ့သူ မမှားဘူး ဒီလူမှဒီလူဖွဈနတေဲ့ကိုယျပဲမှားတာပါ သူဂရုမစိုကျတာလဲ မမှားဘူး ကိုယျ့ကို ဂရုမစိုကျတဲ့သူဆီကမှ ပိုပွီး ဂရုစိုကျခံခငျြနတေဲ့ ကိုယျပဲ မှားနခေဲ့တာပါ သူ့လိုသာနလေိုကျရငျ ဒီအခွအေနတှေအေားလုံးဟာ ပွီးဆုံးသှားလိမျ့မယျဆိုတာသိပမေယျ့လဲ တဈနတေ့ော့ ကိုယျ့အခဈြတှေ မွငျလာမှာပါဆိုတဲ့ မသခြောတဲ့တဈနကေို့ မြှျောနမေိသေးတယျ
ကိုယျ့ကို နာကငျြစတော သူမဟုတျပမေယျ့ အစစအရာရာကို ရငျဘတျထဲထညျ့ထားမိတဲ့ကိုယျက ဘာမှမဟုတျတာနဲ့လဲ သလေောကျအောငျ နာကငျြခငျြနာကငျြနတေတျတယျလေ . .. သူမမှားပါဘူး ပိုခဈြနမေိတဲ့ကိုယျက အစကတညျးက မှားခဲ့တာပါ …
သူမမှားပါဘူး ပိုချစ်မိတဲ့ ကိုယ်ပဲအစကတည်းက မှားနေခဲ့တာပါ …
စိတ်ပူလို့ဆက်တဲ့ဖုန်းတွေ မကိုင်တဲ့သူမမှားဘူး ကိုယ်မလိုမှန်းသိရဲ့နဲ့ အရေးပါချင်နေတဲ့ကိုယ်ပဲ မှားတာပါ .. တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ကိုယ်လဲ သူ့လိုနေနိုိင်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တွေဖြစ်မိတယ် ဒါပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာ သူနဲ့ဝေးများဝေးသွားရင်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကြောက်နေမိတုန်းပဲ
သူခေါ်ရင် ကိုယ်လဲမခေါ်ဘူးဆိုတဲ့ မာနလေးထားကြည့်ချင်တယ် ဒါပေမယ့် သေချာပါတယ် နေနိုင်နေပြီးသားသူက ပိုပြီးပျော်သွားရုံကလွဲလို့ ဘာမှ ခံစားသိလာမှာမဟုတ်ဘူး ကိုယ်ကသာ မာနတွေထားပြီး ကိုယ်ပဲ ပြန်ပြီး နာကျင်နေရမှာလေ …
ချစ်မိအောင် ပြုစားခဲ့တဲ့သူ မမှားဘူး ဒီလူမှဒီလူဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်ပဲမှားတာပါ သူဂရုမစိုက်တာလဲ မမှားဘူး ကိုယ့်ကို ဂရုမစိုက်တဲ့သူဆီကမှ ပိုပြီး ဂရုစိုက်ခံချင်နေတဲ့ ကိုယ်ပဲ မှားနေခဲ့တာပါ သူ့လိုသာနေလိုက်ရင် ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးဟာ ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာသိပေမယ့်လဲ တစ်နေ့တော့ ကိုယ့်အချစ်တွေ မြင်လာမှာပါဆိုတဲ့ မသေချာတဲ့တစ်နေ့ကို မျှော်နေမိသေးတယ်
ကိုယ့်ကို နာကျင်စေတာ သူမဟုတ်ပေမယ့် အစစအရာရာကို ရင်ဘတ်ထဲထည့်ထားမိတဲ့ကိုယ်က ဘာမှမဟုတ်တာနဲ့လဲ သေလောက်အောင် နာကျင်ချင်နာကျင်နေတတ်တယ်လေ . .. သူမမှားပါဘူး ပိုချစ်နေမိတဲ့ကိုယ်က အစကတည်းက မှားခဲ့တာပါ …